Mpanamboatra sy mpamatsy panneaux acoustique - Factory Acoustic Panel China
Kianja akustika voaravaka lavarangana Stadium
Ny tontonana acoustique perforated dia vita amin'ny borad MDF avo lenta ary manana fiasa eo amin'ny tontolo iainana, ny lelafo ary ny tantera-drano. ny loko isan-karazany sy ny choise vita dia afaka manaparitaka ny takian'ny akustika sy ny fihenan'ny mpanjifa. raha oharina amin'ny tontonana acoustika miorina, ny tontonana hazo perforated dia misy fiatraikany tsara kokoa amin'ny vokany.
Eco Ceiling And Wall Acoustique hazo hazo
Ny hazo tontonana Acoustic dia vita amin'ny borad MDF avo lenta ary manana fiasa manodidina ny tontolo iainana, maharitra ary tsy mahazaka rano. ny loko isan-karazany sy ny choise vita dia afaka manaparitaka ny takian'ny akustika sy ny fihenan'ny mpanjifa. raha oharina amin'ny tontonana acoustika miorina, ny tontonana hazo perforated dia misy fiatraikany tsara kokoa amin'ny vokany.
Takelaka hazo MDF mandoka feo
Ny takelaka hazo MDF dia vita amin'ny birao MDF avo lenta. Araka ny fepetra takian'ny acoustique sy ny haingo an'ny mpanjifa, ny tontonana acoustique hazo alika antsika dia afaka ampiarahina amin'ny tontolo iainana miavaka, tsy mahazaka lelafo ary fiasa tsy tantera-drano, ary mety miloko isan-karazany sy mifarana safidy.
Tora-drindrina hazo, hazo akustika
Tontonana valindrihana hazo, hazo akustika dia slot eo alohany, manaparitaka ny vodi-rindrin'ny resonance material perforated izay manana fampisehoana akustika haavo ambany. Ampiasaina betsaka amin'ny haingon-trano sy ny fampisehoana varavarankely io. Amin'ity tontonana ity dia afaka miaina amin'ny toerana azo oharina isika izay afaka mitondra fahafinaretana ahazoana aina bebe kokoa. Ny efitrano iray misy ity takelaka ity dia mampiseho ny tsiro be an'ny tompony ihany koa.
Panneaux acoustique hazo mdf haingon-trano anatiny
Ny takelaka akustika hazo dia eo anoloana, manaparitaka ny vodin-kavoara misy resonance material perforated izay manana fampisehoana akustika haavo ambany. Ampiasaina betsaka amin'ny haingon-trano sy ny fampisehoana varavarankely io. Amin'ity tontonana ity dia afaka miaina amin'ny toerana azo oharina isika izay afaka mitondra fahafinaretana ahazoana aina bebe kokoa. Ny efitrano iray misy ity takelaka ity dia mampiseho ny tsiro be an'ny tompony ihany koa.
Volom-bolo vita amin'ny volon'ondry, takelaka akustika volon'ondry hazo, volon'ondry hazo
Volom-bolo vita amin'ny volon'ondry, takelaka akustika volon'ondry vita amin'ny hazo, volon'ondry hazo izao no mpitarika amin'ny sokajy vokatra tontolon'ny tontolon'ny akustika ary mahomby ary mahomby. Ireo takelaka akustika fibre hazo ireo dia mahomby amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana feo mandritra ny insulateur thermally; ara-tontolo iainana, ny volon'ondry akôlika dia tsotra hamokarana; ary ny takelaka dia misy amin'ny loko maro samihafa sy loko maro loko izay azo natao hohaingoana amin'ny haingo rehetra.
Ireo takelaka vita amin'ny hazo simenitra miorina amin'ny tontolo iainana ireo dia tsy vitan'ny hoe mamelona efitrano misy karazana famolavolana, fa ireo takelaka volon-tratra hazo akora dia mampihena ny akony sy ny feo amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo. Ny takelaka volon'ondry hazo dia afaka manova ny hatsarana sy ny akustika amin'ny toerana anatiny rehetra.
Birao simenitra vita amin'ny volon'ondry, takelaka volon'ondry hazo, takelaka volon'ondry hazo
Voninkazo simenitra vita amin'ny volon'ondry, takelaka volon'ondry vita amin'ny hazo, takelaka vita amin'ny volon'ahitra vita amin'ny 65% ​​fibre hazo poplar voajanahary afangaro amin'ny simenitra portland 35%, izay misy fangaron'ny feo sy haingo tsara. Ny fomba fanaingoana maoderina ny tontonana akustika simenitra vita amin'ny hazo dia afa-po amin'ny ankamaroan'ny olona. Misy karazana loko azo fidina, tabilao loko Vinco no atolotra ho anao. Ny tontonana akustika simenitra vita amin'ny hazo dia be mpampiasa amin'ny efitrano fanovozana, efitrano fampirantiana, efitrano fivoriana.
Varavarana rindrina 3d haingon-trano, rindrina tsy misy feo akustika, rindrina akustika
Ity takelaka akustika ity dia vita amin'ny fibre polyester 100%. Ity fitaovana ity dia mety haverina averina 100%. Mahery, mora ampiasaina, mora karakaraina, azo amboarina amina endrika isan-karazany arakaraka ny filàna isan-karazany. Ity fampahalalana manaraka ity dia tontonana akustika mahazatra izay ahafahantsika manapaka ny endrika namboarina noho ny fangatahan'ny mpanjifa.
Takelaka fampisehoana feo
fihenan'ny tabataba amin'ny hakitroka avo lenta
polyester fibre dia namboarina ho toy ny cocoon landy endrika avy amin'ny haitao avo-teknika ny avo indrindra refy coefficient fanamafisam-peo dia hatramin'ny 0.9.
fitaovana voajanahary azo ampiasaina amin'ny loko maoderina isan-karazany amin'ny fomba haingon-trano.
Takelaka mahavariana, tontonana akustika 3d, fitaovana manintona, takelaka rindrina tsy misy feony
Fihenan'ny tabataba amin'ny hakitroka avo lenta.
Ny fibre polyester dia namboarina ho endrika landihazo cocoon avy amin'ny haitao avo lenta ny coefficient avo lenta avo indrindra dia hatramin'ny 0.9.
Fitaovana voajanahary azo alaina amin'ny loko maoderina isan-karazany amin'ny fomba haingon-trano.
Efitra akustika, takelaka rindrina vita amin'ny lamba, takelaka akustika nofonosina, akon'ny feo
Efitra akustika, takelaka rindrina vita amin'ny lamba, takelaka akustika nofonosina, feon-kira akustika amin'ny feo dia manana fantsom-panafosana feo be sy coefficient avo lenta ny feo, ary ny effet effet absorption tsara kokoa ho an'ny ambany, salantsalany ary avo matetika. Ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny hatsiaka ary ny fahanterana, ny fanoherana no toetra mampiavaka ny tontonana akustika lamba. Ireo toetra ireo dia mahatratra ny fampiharana isan-karazany ny tontonana akustika lamba.
Tonga hatrany amin'ny haavo B nasionaly ny haavon'ny fiarovana afo ary ny fiarovana ny tontolo iainana dia ny haavon'ny firenena E1. Miaraka amin'ny fahalalahana tsara, ny tontonana akustika vita amin'ny lamba dia vita amin'ny akora malefaka.